GROUPE EDUCATIF ACEEM: Jeudi 7 Mars 2019
Ambohi-pihaonan’ny fianakaviamben’ny vondrom-panabeazana ACEEM ny teto amin’ny Université ACEEM Manakambahiny ny alakamisy 7 Marsa 2019. Lanonana maro sosona teo ambany fitarihan-dRamatoa Ramaholimiaso Madeleine, Grand Chancelier no notontosaina teto, ary nohotronin’ireo olo-manan-kaja maro. Fotoana indrindra koa nanamarihana ny famaranana ny fankalazana ny faha-30 taonan’ny vondrom-panabeazana ACEEM sy ny tsingerin-taonan’ireo sampana isanisany: ny faha-25 taonan’ny IEF ACEEM, ny faha-20 taonan’ny Lycée PRIVE ACEEM, ny faha-20 taonan’ny Radio ACEEM,ny faha-20 taonan’ny IEFPA ACEEM ary ny faha-10 taonan’ny Université ACEEM.
Ny 25 Febroary 1986 no niorenan’ny ACEEM.Mandia ny faha-32 taonany ny ACEEM ankehitriny. Tany am-piandohana ny fanalavana azy dia ny hoe Association Culturelle des Enseignants et Elèves de Madagascar, fa ny 25 Marsa 1995 kosa no niovany hoe Action pour la Culture, l’Enseignement et l’Education à Madagascar.
Mifanindran-dàlana indrindra amin’izany fotoam-pankalazana izany ny lanonana fitokanana ny fanitarana foto-drafitr’asa natao teto amin’ny Université ACEEM, ary ny lanonana fanolorana mari-boninahitra sy medaily ho an’ireo mpiasa eo anivon’ny vondrom-panabeazana ACEEM. Nialohavan’ny lahateny nifandimbiasana izany rehetra izany, koa raha nandray fitenenana ny Filoha mpanorina ny vondrom-panabeazana ACEEM, Andriamatoa Ratrema William, nanoloana ny fampahatsiahivana ny tantaran’ny ACEEM izay notateriny teto, dia nomarihiny fa tsy ny fampitomboana ny toeram-pampianarana sahanina ihany no nataon’ny ACEEM ho zava-dehibe fa ny fanatsarana indrindra indrindra ny fomba fampitàna fahalalana sy ny fomba famolavolana ny toe-tsain’ireo tanora beazina.
Tsy ho tanteraka ho azy anefa izany, hoy Andriamatoa Ratrema William raha tsy miaraka amin’ny fanomezana tontolo, foto-drafitr’asa, fitaovana mifanaraka amin’ny toetr’andro ahafahan’ny mpampianatra manatanteraka ny asany. Santionan’ny vokatry ny ezaka ataon’ny ACEEM ny eto amin’ny Université ACEEM izay notokanana nandritra ity lanonana ity: Nasondrotra rihana iray ny trano, misy efitrano fianarana telo vaovao, efitrano fivoriana misy écran, sy fahitalavitra lehibe ahazoana mifandray amin’ny alalan’ny Skype any ivelany. Misy Birao maromaro ho an’ny tompon’andraikitra, misy efitra roa vaovao natokana ho an’ny Scolarité. Napetraka ny fitaovana ara-teknolojia mifanaraka amin’ny toetr’andro hanatsarana ny fampianarana sy hahazoana mandrindra ny fiainan’ny Université amin’ny ankapobeny. Tsy eto amin’ny Université ACEEM ihany no nasiana fanatsrana toy izany fa any amin’ireo Sampana ACEEM rehetra, toy ny Lycée Privé ACEEM Ankadivato, nasiana CYBER maimaim-poana, fitaovana fialam-boly samihafa. Ny IEF ACEEM nasiana toerana filalaovana Basket, ary ny eny amin’ny Sehatra Fialam-boly eny Anjeva izay misy efitrano lehibe sy toeram-panatanjahan-tena samihafa dia hasiana Piscine ihany koa tsy ho ela. Marihina manokana fa dia efa misokatra ihany koa ankehitriny ny SITE WEB an’ny ACEEM sy ny fampiasany ireo tambazotran-tserasera samihafa toy ny Youtube, ny Facebook, ny Instagram sy ny sisa.
Fa isan’ny nanamarika indrindra ny lanonana teto ny fanolorana mari-boninahitra sy Medaily ho an’ireo mpiasa miisa 24 ka anisan’izany ny Filoha mpanorina ny vondrom-panabeazana ACEEM, Andriamatoa Ratrema William, nosalorana ny mari-boninahitra fara-tampony Grand croix du 2ème Classe. Ny Tale jeneraly Ramaromanana Sylvain nosalorana ny Mari-boninahitra Grand Officier. Ramatoa Rasolonirina Berthe, Chef Section nasondrotra ho eo amin’ny Gradin’ny Officier de l’Ordre national. Nomena ny Chevalier de l’Ordre national ny Talen’ny Cours ACEEM Analakely, Andriamatoa Randriantsoa sy ny Proviseur’ny IEF ACEEM Andravoahangy, Ramatoa Razafimanantsoa Eliane Marie. Mpanabe sy mpandraharaha miisa 19 notolorana ny Medaille d’argent ary miisa 5 Médaille de Bronze.